® Lithini ikhadi lam kwiTarot yoSuku? | Fumanisa SIMAHLA yonke imihla!
Yiya eArcana ukwazi umyalezo wanamhlanje ukuba I-Tarot yosuku. Ungalibali ntsasa nganye ukujonga iziganeko ezikulindeleyo fumanisa.online
1 I-Tarot yemihla ngemihla: I-arcana yakho yosuku
1.1 IArcana yanamhlanje
1.2 Luza kuhamba njani usuku lwam?
I-Tarot yemihla ngemihla: I-arcana yakho yosuku
Thatha ithuba lokujikeleza kwethu simahla ukufumanisa ngekamva kwikhadi lanamhlanje, uya kujongana neeyure ezingama-24 ezilandelayo unethemba olifaneleyo.
Inkqubo ilula kakhulu: kuya kufuneka ufake idatha kwifom, kwaye iya kubonakala ingcebiso yosuku olwenzelwe wena. Iingcebiso ezilungileyo zothando lwakho, umsebenzi kunye nobomi bempilo enkosi kwi-arcana yemihla ngemihla.
Los I-arcana yemihla ngemihla ikulungele «Ileta yam yosuku«, Ngomyalezo owenzelwe wena.
Ngale ndlela uya kwazi into yokuqala kusasa ukuba usuku luza kukuphathela ntoni kwaye uya kuba nakho ukuthatha izintso ngokufanelekileyo kwaye I-100% yasimahla. Fumanisa ukuba ikamva lakho linantoni na kwaye ubonise ubuso bakho.
Siza kukucebisa ngomsebenzi, uthando, imali kunye nempilo. Siza kusombulula onke amathandabuzo kunye neemfihlakalo zemihla yakho yemihla ngemihla ukuze wenze ezona zigqibo zibalaseleyo ungoyiki into enokwenzeka.
Luza kuhamba njani usuku lwam?
Enkosi kumava kunye namava abanye abantu kwaye unxulumene nobukho bakho (ngokungathanga ngqo okanye ngokuthe ngqo) uya kuba nakho ukwazi iintshukumo oya kuba nazo kuyo yonke imini yakho, Shiya nantoni na ukuba yenzeke kwaye sonwabe ekuphela kobomi esinabo kweli lizwe lixabisekileyo.
Siza kutsala amandla onawo okujikeleze yonke imihla ngokubonisana noMama weNdalo, yonke i-intanethi kunye nesimahla.
Siwajonga njani amandla? Kuya kufuneka uyazi ukuba umntu ngamnye unakho kubomi babo bemihla ngemihla Zombini ezibi kunye namandla aqinisekileyo, kwaye isenzo ngasinye esenza amandla ethu siguqulwa kwindalo esingqongileyo. Kungenxa yoko le nto sikubuza nje uzirhangqe ngabo bantu apho ukungcangcazela kunye nonxibelelwano zikwixesha elifanayo, ukuba uziva ukuba umtsalane kunye nonxibelelwano, ukuze kuwe.
Xa usenza i Tarot yosukuJonga ngononophelo kwimiyalezo ekunika iileta, kuba uya kuba nomyalezo oya kuthi uqhubekeke kwaye ubambe ngendlela eyahlukileyo. Vumela ukuqonda kwakho ukuba uthethe kwaye uziveze, kwaye umamele.
Ukuba ulindele umyalezo, kwaye amakhadi akunike omnye umyalezo obungawulindelanga, Sukunyanzela izinto, kuba kungekudala okanye kamva ziya kugqibela ukuza ebomini bakho. Kubalulekile ukuba Masisoloko sisenza ngentlonipho nothando nabahlobo bethu kunye nosapho.
Yongeza iphepha lethu kwiintandokazi ukuze yonke imihla ekuseni yenza ufundisiso lwakho lwemihla ngemihla. Kwaye nceda, sukubaleka kabini ngosuku olunye, njengoko imiyalezo inokudideka.